स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रक्षेपण :असोजदेखि तेस्रो लहर, ३८ हजारभन्दा बढीलाई भर्ना गर्नुपर्ने – Health Post Nepal
२०७८ साउन ११ गते १७:२१
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी असोज १५ देखि कोरोनाको तेस्रो लहर आउने प्रक्षेपण गरेको छ ।
सोमबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा आगामी असोज १५ देखि तेस्रो लहर आउन सक्ने उल्लेख छ ।
‘कोभिड–१९ को वर्तमान अवस्था तथा संक्रमणदरलाई हेर्दा तेस्रो लहर सम्भवतः असोज १५ देखि मंसिर महिनाको बीचमा फेरि आउन सक्छ । यद्यपि भेरियन्टको स्वरुप र प्रकृति, खोपको उपलब्धता र प्रयोग, सामाजिक गतिविधि तथा जनस्वास्थ्यको आधारभूत मापदण्ड पालनाको स्तरले यसलाई अगाडि पछाडि धकेल्न सक्दछ,’ मन्त्रालयले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हालको स्थिर अवस्थालाइ हेर्दा आगामी पाँच महिनामा १ लाख ९३ हजार ८ सय ५६ नयाँ संक्रमितहरू थपिने सम्भावना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा ३८ हजार ७ सय ७१ जना संक्रमितहरूलाई अस्पताल भर्ना गरी उपचार गर्नु पर्ने र सोमध्ये ९ हजार ७ सय ९३ जनालाई सघन उपचार गर्नुपर्ने मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले बताए।
सरकारले आगामी चैतसम्म ४ करोड बढी डोज कोरोनाविरुद्धको खोप प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
मन्त्रालयले उमेरका हिसाबले खोप लगाउन योग्य सबै (लक्षित) नागरिकलाई पुग्ने गरी चैतसम्म ४ करोड २८ लाख ४८ हजार डोज खोप प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
सरकारले चैतसम्म २ करोड ६५ लाख नागकिरलाई खोप लाउने लक्ष्य लिएको छ। जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले चैतसम्म खोप लगाउने भनिएका सबै नागरिकलाई पुग्ने गरी खोप प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको बताए।
लक्षित समूहका सबै नागरिकलाई दुई मात्रा लगाउँदा ५ लाख ६५ हजार बढी डोज खोप आवश्यक पर्ने देखिन्छ। तर, केही खोप सिंगल डोज ९पहिलो मात्रा० मात्रै लगाए पुग्ने खालको पनि प्राप्त हुने भएकाले प्रक्षेपण गरिएअनुसारको खोप लक्षित समूहका सबै नागरिकलाई लगाउन पुग्ने उनले बताए।
सचिव अर्यालले कोभ्याक्सबाट १ करोड १३ लाख डोज निःशुल्क प्राप्त हुने बताए।
कोभ्याक्सबाटै लागत सहभागीतामा कोभिसिल्ड, मोडर्ना, फाइजर, जोनसन, सिनोभ्याक्स आदि गरी १ करोड ५० लाख डोज खोप प्राप्त हुने बताए।
यसैगरी, असोजदेखि चैत सम्ममा बालबालिकाहरुका लागि ६० लाख डोज फाइजर खोप पनि उपलब्ध हुनेछ।
यस्तैगरी, एचडियु, आईसीयु, अक्सिजन प्लान्ट निर्माणलाई निरन्तरता दिनुका साथै बालबालिकाहरुको उपचारका लागि एनआईसीयु सुदृढ गर्ने काम पनि अगाडि बढाइएको डा. लोहनीले बताए । सरकारले तेस्रो लहरलाई मध्यनजर गर्दै अतिरिक्त रुपमा भरिएका ९ हजार अक्सिजन सिलिण्डर तयारी अवस्थामा राख्न संघ तथा प्रदेशलाई निर्देशन समेत दिएको छ।
मन्त्रालयले आज स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा सातवटै प्रदेशलाई पत्र पठाउँदै विभागमा २ हजार वटा र प्रदेशमा कम्तीमा १ हजार वटा अक्सिजन सिलिण्डर अतिरिक्त रुपमा राख्न निर्देशन दिएको हो ।